Ikhaya Kunye Negadi
Iividiyo zentsholongwane xa kuthelekiswa nomxholo we-Evergreen kwiYouTube
NguRob Ciampa, uTheresa Moore, uJohn Carucci, uStan Muller, uAdam Wescott
Enye into eyenziwe yi-Intanethi kukusasazeka kwevidiyo yentsholongwane. Njengentsholongwane (ngaphandle kokuba luhlobo olulungileyo olungazukugula), ividiyo yentsholongwane isasazeka ngokukhawuleza kwi-Intanethi kwaye inokufumana iimbono ezizigidi ngexesha elifutshane.
Kwicala eliphambeneyo lembonakalo kukho i ihlala iluhlaza ividiyo: Njengoko igama layo lisitsho, iividiyo ezinomahluko zihlala zihlala zintsha kwaye ziphilile ixesha elide, zibonelela ngomgangatho ongapheliyo kumxholo.
Injongo yejelo lakho ixhomekeke ekubeni ukwazi ukuzisa ababukeli abaninzi kangangoko kunokwenzeka kumxholo wakho. Ngamanye amaxesha ivela kwividiyo enye, nangona ithandwa kakhulu, ngelixa ngamanye amaxesha ingaphezulu ngokuba noluhlu olusempilweni lomxholo ofanelekileyo.
Ukwenza ividiyo enye yentsholongwane kunokuzisa ingqalelo enkulu kwisitishi sakho, kwaye olo tyelelo lunokukhawuleza lwenze imali kwiibhokhwe ezinkulu, ngakumbi ngevidiyo egcina iimbono ezizigidi. Kwelinye icala, iividiyo ezihlala ziluhlaza (jonga ngezantsi) ziboleka amandla amancinci, nangona zizinzile ngokwakhiwa kwemixholo eyahlukeneyo egcina abantu bebuya.
Musa ukubheja isicwangciso sakho seYouTube ukuzama ukwenza ividiyo yentsholongwane. Xa kuziwa kwividiyo zentsholongwane, kukho into engahleliyo kwimpumelelo yabo engenakuhlala iphindaphindwa kwixesha elizayo. Nangona kunjalo, unokwenza ezinye izinto ukuze uphumelele ngokungathandabuzekiyo.
Iividiyo zentsholongwane zihlala zinento ethile ethandwayo okanye yangoku evumela ukuba yakhe abaphulaphuli abaninzi ngokukhawuleza. Umzekelo, umdaniso omtsha womdaniso okanye ividiyo yomculo ngamanye amaxesha yenza eyona vidiyo ibukelweyo, kodwa inokubakho nesiganeko seendaba esimangalisayo okanye istrunt sasendle abantu abangakwaziyo ukuyeka ukuthetha ngaso. Ngamanye amaxesha iphela ngokukhawuleza njengoko iqale, ngelixa ngamanye amaxesha iyanamathela.
Njengomthi we-shrubbery ongaguqukiyo umdaka, ividiyo ehlala iluhlaza ihlala ithandwa ngabaphulaphuli bayo abade ixesha elide. Kungenxa yokuba iqulathe umxholo abantu abaza kuwukhangela rhoqo nangaphezulu kwexesha elandisiweyo.
Ukuba iYouTube yayisisiqandisi, xa kuthelekiswa ezi zimbini, ividiyo yentsholongwane yayiya kuba nomhla wokuphelelwa omfutshane kumxholo osoloko uluhlaza. Nangona kukho uxinzelelo oluncinci ekudaleni ividiyo ehlala iluhlaza ephumeleleyo, kusafuna umsebenzi omninzi ukufumana oku kulandelayo. Kuya kufuneka ubazise abantu ukuba iphandle phofu ngelixa igcina kufanelekile ukuba bazame kwaye bakufumane.
Iindidi zomxholo onokuba nazo (ezinokubakho) ixabiso elihlala liluhlaza zibandakanya
Amagqabantshintshi ngamasiko eeholide
Iibhayografi zabantu abadumileyo
Uninzi lomxholo osoloko uluhlaza-iividiyo zokufundisa okanye umxholo onxulunyaniswa nomsitho wembali, umzekelo - awuhlali uhamba ngentsholongwane kodwa ungonwabela ixesha elide lokuthandwa kuba umxholo uya kuqhubeka ukutsala umjelo wababukeli.
yintoni i-automator kwi-mac
Uluhlu lwezono eziqhelekileyo zokufa
ipliva 434 vs xanax
ungaxuba i-aleve kunye ne-ibuprofen
iipilisi ezipinki namhlophe 44 107